May Nyane: Maryland က သီးလေးသီးရဲ့ ပွဲ
( မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ လိုအပ်တာလေးတွေကို ရံပုံငွေအဖြစ် ကူညီပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တာမို့ )
ရံပုံငွေဆိုပဲ။ ဟဲဟဲ… စာရင်းဇယားနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ သုံးစွဲလဲဆိုတာ ပြောဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား? ထုံးဆန်အတိုင်း စာရင်းဇယားမရှိပဲ အိပ်ထဲရောက်ကုန်လေသတည်းဆိုတာ နဲ့ပဲ ပြီးမှာပါ။ သတိလည်းထားဦးနော် လိမ်စားထားတာလေးတွေ ဘဏ်ပျက်တာနဲ့ တိုးလို့ ပလုံသွားဦးမယ်
နောက်ဘယ်တော့မှ *သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ လို့
" ဇော်မျိုး " အစား " ကျွန်မျိုး " လို့သာ ပြောင်းသုံး
ဂွပ် … ဂွပ် … ဂွပ် … ဂွပ် … ဂွပ် … ဂွပ် … ဂွပ် … ဂွပ် … ဂွပ် ……။
"တော်ပေသေးသည် ကျွန်ုပ်သည်လည်း "ကျွန်မျိုး"နှင့် နီးရာတွင် မနေသူမို့ "ကျွန်မျိုး"ရော ကျွန်ုပ်ရော နှစ် ယောက်လုံး သက်သာရာ ရသွားခဲ့ပေ၏။ နို့မဟုတ်ပါက ခေါင်းခေါက်ရလွန်းလို့ကျွန်ုပ် ၏ လက်ဆစ်များသည် လည်းယောင်ယမ်းငန်းဖမ်းသလိုဖြစ်ကာ"ကျွန်မျိုး"သည်လည်း ကျပ်မပြည့်သည့်ဘ၀မှ သွက်သွက်ချာ ရူးသွပ် သွားနိုင်ပေတော့သတည်း။"
သို့ အောက်တန်းစား ဒီမိုငတုံး Bad Side of ME
မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေက ပြောလိုက်ရင် မိုးလောက်မြင့်တဲ့ စကားတွေချည်းပဲ။နအဖကို ဆုံးမနေလိုက်တာ တကယ်ကို သူတော်ကောင်းကြီးတွေ သဖွယ်ပဲ။ မင်းတို့ ပါးစပ်ကမချတဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ လူအခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ? ရိုင်းတာ? ဆဲတာ? အမြင်မတူတဲ့သူတွေကို ဘန်းတာ ဒီမိုကရေစီလား? မင်းတို့ ဒီမိုဘလော့မှာ အမြင်မတူတာကို လက်ခံတဲ့ ဘလော့ရှိရင် တစ်ခုလောက် ပြောပြစမ်းပါ။ လက်တွေ့မှာ နအဖ ဘလော့တွေအားလုံးကတော့ လွတ်လပ်ခွင့် မင်းတို့ ထက်ပိုပေးတယ်။ ဘယ်သူက ဒီမိုကရေစီပိုကျသလဲ ကလေးက အစသိပါတယ်။
ငါပြောတဲ့စကားက ရိုင်းဆိုင်းတာဘာမှ မပါဘူး။ မင်းတို့ လိမ်စားနေတာလူတိုင်းသိတယ်။ မင်းတို့ဒီမိုမီဒီယာတွေကတော့ အဲဒီ သတင်းကို အမှောင်ချတားတ ခုပဲ ရှိတယ်။ (အခု မောင်ဒယ်မလေး ဇတ်လမ်း ဟော့နေတယ်။ အပြင်းပြေဖတ်ကြည့်။ ဒီမိုမီဒီယာတွေရှိနေသမျှ တနေ့ တမျိုးမရိုးရအောင် ရယ်မောရစေမယ်) စက်တင်ဘာတုံးက မိုးမခ ဒီမိုကရေစီရှရှိရေးအတွက် ဆိုပြီး အလှူခံသွားတယ်။ ဘယ်မှာလဲ အသုံးစာရင်း? အလှူပဲခံတိုင်းဘယ်တုံးကမှ စာရင်း ထွက်မလာဘူး။ ငါက ဒီမိုဘလော့တွေကို အထင် မကြီးတော့ အမြဲတမ်း မကြည့်အားဘူး။ တကယ်လို့ မိုးမခက စာရင်းကြေငြာတယ် ဆိုရင် အဲဒါရဲ့ လင့်ကို ပြပါ။ ငါ့အနေနဲ့ ဒီမိုငတုံးတွေကို နည်းနည်းပိုလေးစားပေးမယ်။ မင်းတို့တွေက ပုံအမျိုးမျိုးနဲ့ လိမ်နေတာ မယုံတဲ့သူကို ဒေါသမထွက်နဲ့။ ကြားလား? ဒီမိုငတုံး။
မင်းအခုစာရေးနေတာ မြန်မာအမျိုးသမီး ဒေါ်မေငြိမ်းရဲ့ ဘလော့မှာနော်။ ငါကတော့ ဆရာမနဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောထား မတူညီပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီ ဆရာမကို အရိုအသေပေးတယ်။ မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေဆိုရင် ဆရာမနဲ့ ၀ါဒတူတွေပဲ ငါ့ထက်တောင် ပိုလေးစားသင့်တာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား? မင်းရေးတဲ့စာ အဆင့်အတန်း မင်းအသိဆုံးပါ။ မင်းတို့ ကောင်တွေ ကိုယ်တိုင်က အဆင့်မရှိပဲ နအဖကို ဆရာသွားလုပ်တော့ ဟိုက ဂရုစိုက်မှာလား? စဉ်းစားပေါ့ဗျာ။ စိတ်မဆိုးနဲ့ ဦးဗျာ
လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို ယဉ်ကျေးစွာ အသုံးပြုနေတဲ့
ဇော်မျိုး (ရေမရောတဲ့ တောသား)
သို့ မြန်မာလူမျိုး ဆရာမ ဒေါ်မေငြိမ်း
ဆရာမဘလော့မှာ ကျနော် ပြောတာ စကားလုံးကြမ်းတာပဲ ရှိပါတယ်။ ဆဲတာ မရှိပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို လေးစားတဲ့အနေနဲ့ ကော်မန့်ကို မဖျက်ပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါမယ်။ တောသားနှစ်ယောက်ဟာ ဆရာမ ဆီပုံးမှာ နအဖလူ ဟန်ဆောင်ပြီး အောက်တန်းကျတဲ့ ဆဲဆိုနေတဲ့ ဒီမိုသမားတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုဆိုရင် ဆရာမဆီပုံးမှာ သူတို့ မဆဲတော့ပါဘူး။ အဲဒီကျေးဇူး တရားလေးတွေလည်း ထောက်ထားစေချင်ပါတယ်။
လက်တွေ့ကျကျ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး. . . ဒို့အရေး.. ဒို့အရေး . . ဒို့အရေး
ဇော်မျိုး (တောသားမှ တကယ့်တောသားပါ)
တစ်ယောက်က Maintainance Manager
နောက် တစ်ယောက်က University Teacher
နောက် တစ်ယောက်က Finance field ထဲမှာ
နောက် တစ်ယောက်က IT job.. so on..
ငါမှာလည်းမင်းပြောသလိုban ရအောင် Blog လည်းမရှိပါဘူး
မိုးမခကိုသွားမေးနေရအောင် မင်းက မိုးမခ မှာ ပိုက်ဆံ
သို့ Bad Side of ME
မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေကပြောလိုက်ရင် မိုးလောက်မြင့်တယ်ဆိုတာ အဲဒါပဲ။ ဒီမိုငတုံးတွေလုပ်တဲ့ အလုပ်ကြည့်လိုက်ရင် ဆူရှီနဲ့ စက်ရုံဒါပဲ ရှိတယ်။ (သြော်. . . တောင်းစား၊ လိမ်စားတာ ပါသေးတယ်။ မေ့သွားတယ်။ ) အွန်လိုင်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့ အရာရှိကြီးတွေချည်းဖြစ်ကုန်ရော။ တောသားဆိုပြီး လာလိမ်မနေနဲ့။ ဘာမှ အရာရှိမဟုတ်တာ သိတယ်။
မင်းကိုငါပြောတာ မင်းမှာ ဘလော့ရှိတယ်လို့ ပြောလို့လား? စာကို ပြန်ဖတ်ပါ။ ဒီမိုငတုံးဆိုတော့လည်း စာတောင် ကောင်းကောင်း မဖတ်တတ်ရှာဖူးထင်တယ်။ ငါရေးထားတဲ့စာကို စာကြောင်းပြင်ရေးပေးမယ်။ မင်းလို ငတုံးကို သနားလို့နော်။
နအဖ ဘလော့တွေလို ဒီမိုကရေစီကျကျ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ပေးတဲ့ ဘလော့ရှိသလားလို့ မေးထားပါတယ်။ နအဖက ဒီမိုကရေစီကို လက်တွေ့ကျကျ မင်းတို့ထက်ပိုပေးတယ်လို့ အမှန်အတိုင်းပြောလိုက်တယ်။ မင်းတို့က ပါးစပ်နဲ့ပဲ ဒီမိုကရေစီကို ပေးနေတာ။ နအဖ ဘယ်လောက်မြင့်မြတ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်သာအောင် တင်ပြထားပါတယ်။
ကဲကဲ ဒီမိုမီဒီယာတွေနဲ့ ပဲ အချိန်ဖြုံန်းမနေနဲ့။ ဟိုက သားအရင်းထက် ပိုချစ်လို့ မင်းတို့အတွက် ပိုက်ဆံအကုန်ခံနေတာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီမိုငတုံးတွေအကြောင်းသိလေလေ နအဖကို လေးစားလေလေဖြစ်နေတဲ့
ဇော်မျိုး (တောသားဆိုတာ တကယ်ပါ)
ငါ့အနေနဲ့ ဆူရှီနဲ့ စက်ရုံလုပ်တဲ့သူတွေလို့အထင်မသေးပါဘူး..
သို့ ကျွန်မျိုးBad Side of ME
မြန်မာဆိုတာကတော့ သခင်မျိုးပါပဲ မင်းဟာမင်း ကျွန်ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ကျွန်ပဲလုပ်ပေါ့ကွာ။ ဘာလဲ အင်္ဂလိပ်အောက်မှာ နေရတာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောချင်တဲ့ ဒီမိုငတုံးလား? ဟားဟား.. ဒီမိုဘွဲ့တွေရထားတဲ့ ရူးကြောင်ကြောင် ဒေါက်တာသန်းထွန်းလို အင်္ဂလိပ်မကောင်းတာ ရှာမတွေ့ပါဆိုတဲ့ ငတုံးစကားမျိုးပြောဦးမလို့လား? သိပ်မကြောင်နဲ့။ အဖြူတွေက သူတို့အချင်းချင်းတောင် ကာကွယ်ဆေးမှာ အဆိပ်ခပ်တာ၊ ကောင်းကင်ကနေ အဆိပ်ဖြန်းတာ၊ ဗုံးဖေါက်သတ်တာ စတဲ့ စတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြီး သတ်နေတာ။ မင်းတို့ကောင်တွေဆိုရင် ခွေးလို အသတ်ခံရမှာနော်။ ဒီမိုမီဒီယာတွေနားထောင်ပြီး ကျွန်ခံချင်မနေနဲ့။
သေခြာတာကတော့ မင်းတို့ကောင်တွေကိုယ်က ဆူရှီသမားဖြစ်ရတာ စိတ်ငယ်နေတာ သေခြာတယ်။ မင်းတို့ ဘာလုပ်နေလဲ အမှန်တကယ် ပြောပါလား။ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ရင် အထင်ကြီးအောင် ပေါက်ကရတွေပဲ လိမ်ပြောတယ်။ ငါဆိုရင် ဒီမိုအစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ ကျောင်းတက်တယ်။ မနှစ်က ဘာသာ တစ်ခုကျလို့ ပြန်ယူရတယ်။ မိဘဆီက လိုအပ်ရင် လက်ဖြန့်တောင်းတယ်။ ကုသိုလ်က အဲလောက်အထိ ကောင်းတာဗျ။ ဘယ်လောက်ရိုးသားလဲ? အမှန်အတိုင်းပြောတယ်။
မင်းဦးနှောက်ထဲမှာ ဒီမိုမီဒီယာ အမှိုက်တွေပဲ ပြည့်နေတာ သေခြာတယ်။ မေးခွန်းတစ်ခုကို နှစ်ခါ သုံးခါမက ပြန်ရေးပြတာတောင် ဘယ်လိုပြန်ဖြေလို့ ဖြေရမှန်းမသိဘူး။ မင်းဟာ ရေမရောတဲ့ ဒီမိုငတုံးဆိုတာ ပေါ်လွင်တယ်။ ငါပြောနေတာ မြန်မာတွေလုပ်ထားတဲ့ ဒီမိုဘလော့တွေ လို့မေးထားပါတယ်။ Wikpedia လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာ မပေးတာနဲ့ မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေ ဘလော့က ဘယ်လို ပတ်သက်နေလဲ? ရှက်မနေစမ်းပါနဲ့ကွာ။ မင်းတို့ ဒီမိုဘလော့တွေ လွတ်လပ်ခွင့် ဘယ်ဘလော့ကမှ နအဖ ဘလော့တွေလို မပေးရဲပါဘူး။
နအဖဘလော့တွေ လာစမ်းပါကွာ။ လွတ်လပ်ခွင့်ကတော့ ပေးသလားမမေးနဲ့။ ဘယ်သူ့မှ မဘန်းဘူး။ ကျေးစေတမန်လာမလား? ပိတောက်မြေကိုလာ မလား? ငါတို့ ဘလော့ကို လာမလား? (ဟဲဟဲ ငါတို့ကို နအဖလူလို့ ပြောခံရတာ ဂုဏ်မနိမ့်ဘူး။ ဒီမိုဘလော့လို့ပြောရင်တော့ အရမ်းကို စိတ်ဆိုးမှာ)
ကဲကဲ.. မင်းဖာသာ ပေါကြောင်ကြောင်ရေးချင်တာ ဆက်ရေး.. ငါကတော့ မင်းစာကို အချိန်ကုန်ခံပြီး မပြန်တော့ဘူး =P
ဒီမိုငတုံးတွေကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ တောမှာမွေးတဲ့
ပလပ် ပလပ်နဲ့ဝါးနေတာကလွဲလို့ ဘာသိမှာတုံး..
တယ် ဘယ်က ခွေးတစ်ကောင် တီခြံထဲ ဝင်လာတယ်မသိ.. တီရေ တီ့ခြံထဲ ခွေးလေ ခွေးလွင့် တစ်ကောင်ရောက်နေတယ်။ ခွေးဆို တီ့သားက သနားတတ်တယ်၊ သို့သော် ဒီလိုခွေးမျိုး စီပင်သေနတ်နဲ့ လိုက်ပစ်နေတဲ့ထဲ ပါသွားလည်း မသနားပါဘူး။ ရန်အေးတယ် လေ ဟုတ်ဘူးလား။
သီးလေသီးအကြောင်းပြောမလို့ လာတာပါပဲ ၊ ခွေးမြင်တာနဲ့ အိမ်ထဲ မဝင်တော့ဘူး ..
ah may yay,ko laut phyar ko pyaw lite par byar.kyon myo lot name ma tat par nae lot.bagan khit ka pha yar kyon twae thiek khar kya par tal lot!myo ma sit so po kaung tar pot lot.kyom wa yam pyay nae kyom bine nar ma tot yae new generation pop!naw ko laut phyar yal.
(pyaw sa yar ma kyam aung ah kone pyaw mae,ko tin wim)
Mg Mg Kyaw Win said...
Welcome to the States, Sayama May Nyein!
My email address is maungw@gmail.com
I am now living in Wheaton, IL States.
Drop meafew lines when you are free.